U-Ellicott Umemezela Uchungechunge Olusha ngokuphelele lwe-2070 Dragon Dredger
U-Ellicott Umemezela Uchungechunge Olusha ngokuphelele lwe-2070 Dragon® Dredger
I-BALTIMORE, MD - U-Ellicott ujabule ukumemezela ukwakheka okusha kwe-20 ”(500 mm) ye-cutter suction, i-Series 2070 Dragon® ukwehla.
I-dredger entsha isebenzisa ubuchwepheshe besimanje, obusha besikhathi namasu wokuqamba athuthukile. Le yunithi ekugcineni izothatha isikhundla seDrive 1870 Dragon eyaziwa ngokuthi yi-Ellicott kanye nokwe-stock 20 ”dredge.
"Lokhu kuwumbono wesimanjemanje futhi osebenzayo ngaphandle kokuzibophezela ngokuguquguquka, impilo ende, kanye namanani aphezulu wokukhiqizwa abanikazi be-1870 abalindele," kusho uPaul Quinn, iPhini likaMongameli Wezentengiso ku-Ellicott. "Njengoba izinyanga ezingaphezu kwe-18 zisakhiwa, lo mklamo ocwaningwe kakhulu futhi waklanywa kakhulu u-Ellicott owake waba nawo."
Njenge-1870, i-2070 Dragon inika amandla amaningi epompini isebenzisa injini ebekelwe ukukala Ku-1300 HP (970 kW) futhi inenjini ehlukile ye-440 HP (328 kW) enikezelwe ohlelweni lokubacindezela. Lolu hlelo olunezinjini ezimbili luvumela amandla agcwele wokubacindezela ku-cutter nama-winches, noma ngabe ama-RPM ancishisiwe kupompo abizelwa - okuthile okwenziwa yenjini eyodwa akukwazi ukukwenza.
Zonke izinjini zivela e-Caterpillar futhi ziyahlangabezana nawo wonke amazinga asezingeni lomoya.
Ihabhu elisha lenzelwe ukuthi lihlangane neMithetho ye-BV Yama-Shelified Waters. Indlela entsha yokuqamba ivumela ukwanda kokuthwala kanye nokwakhiwa okulula ensimini. U-Ellicott wafeza lezi zinhloso ngokunciphisa inani lamaphenathi aseceleni asuka kwabane kuya kwababili. Ngaphezu kwalokho, i-dredge isebenzisa idizayini entsha, eyenziwe lula yomnsalo.
Enye intuthuko enkulu uhlelo lwe-hydraulic, manje olususelwa kumaphampu wokufuduka wokufuduka osebenza kahle kakhulu. Le ndlela ivumela ukufaka okuncane kwe-HP futhi ngenxa yalokho ukusetshenziswa kawoyela okuncane ukuthola amandla afanayo we-hydraulic kumadivayisi. I-2070 ifakwe futhi ngogesi wesimanje ngaphezulu kwesistimu yokulawula i-hydraulic isebenzisa abalawuli beParker IQAN ngokwenyusa ukuthembeka.
Izinketho ezinjenge-anchor booms, noma i-spud carriers, noma i-swivel elbow discharge ingangezwa kalula.
Ngomklamo wayo wemithetho ye-BV Shelters Water, i-20 ”(500 mm), ukujula kokujula, kanye nokwenza ngcono okuthuthukile, Uchungechunge lwe-50 Dragon lufanele amaphrojekthi ahlukahlukene. Lokhu kusebenza kuzobandakanya: ichweba, umfula kanye nokufakwa umgwaqo emanzini, amaphrojekthi wokuvuselela umhlaba, isihlabathi izimayini, kanye nezimayini kanye nezindawo zokudotshwa kwamachibi.
Imininingwane Yesifinyezo - 2070 Dragon Dredger
Ingqikithi efakiwe HP / KW: 1740 HP (1297 kW)
Injini eyinhloko: Injini ye-CAT C32 Diesel Injini, i-1300 HP (969 kW)
Injini EsizayoInjini yedizili yeCAT C15, 440 HP (328 kW)
Amandla okusika: 250 HP (186 kW)
Amandla wePampu: 1200 SHP
Ubude obuphelele: I-111 ft (34 m)
Ukumba Okujulile: I-50 ft (15 m)
I-Suction Pipe Diamitha: I-intshi ye-20 (508 mm)
Dlulisa Ububanzi: Amasentimitha angama-20 (508 mm)
Ngeminye imininingwane, sicela uthintane noNks Robin Manning, Umphathi Wezentengiso.